August 2019 – Kalfadhi
August 31, 2019 August 31, 2019 Hassan Istiila
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa oo kamid ah mudenayaaaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga so doortay maamul gobaleedka Galmudug ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharrax u taagan inuu noqdo madaxweynaha Galmudug. Munaasabad ka dhacday hotelka Safari ee magaalada Muqdisho ayuu Xildhibaan Odawaa ku faah faahiyay sababaha ku qasbay inuu waqtigan u istaago musharraxa madaxweyne ee maamulka Galmudug. Waxa uu sheegay in xilligan ay tahay xilligi si hagar la’aan ah loo dhisi lahaa maamul hagaagsan ayna u dhammeytiranyihin heykalkii maamul ee uu xaqa u…
Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdishu kulan kula qaatay wafdi heer-sare ah oo uu hoggaaminayay Stefano Manservisi oo ah Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Iskaashiga iyo horumarinta caalamiga iyo Masuuliyiin kale. Kusimaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka ahna Guddoomiye kuxigenka 1-aad ee Golaha Shacabka Mudane Cabdiwali Ibraahim Sheikh Mudey iyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa waxa uu ka dhacay Xarunta Guddiyadda iyo Guddoonka Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa. Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in shirka looga…
August 31, 2019 Hassan Istiila
Ciidamo ka tirsan Howlgalka Nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta gaaray Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaasi oo uu shalay gaaray Taliyaha guud ee Amisom. Xildhibaano heer Federaal ah, Saraakiil ka tirsan Qaybta 21aad ee Ciidamada Xoogga Dalka iyo Bulshada deegaanka, ayaa ciidamada Jabuuti ku soo dhoweeyay gudaha magaalada. Senetor Jawaahir, oo kamid aheyd xildhibaanada iyo Senatarada soo dhoweyn ciidamada ka qeyb-gallay, ayaa sheegtay in amni-darro ka jirta magaalada Dhuusamareeb darted aan loogu yeerin ciidamada AMSISOM, balse loogu yeeray in ay kobciyaan dhib-u-heshiisiinta, iyagoo ciyaaraya kaalinta Hiil-Walaal iyo…
Xildhibaannada golaha Shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli ku jira fasax laba bilood ah iyaga oo shaqada dib ugu soo laaban doona 27-ka bisha Sebteembar. Qaar kamid ah xildhibaannada golaha ayaa u safray dibadda halka qaar kalena ay ku laabten deegaanadii laga soo doortay kuwa badana waxa ay weli ku sugan yihiin caasimada Muqdisho. Xildhibaan Maxamed Xasan Ganey oo kamid ah xildhibaannada golehan ee laga soo doorto maamulka Jubbaland waxa uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo isaga oo si dhaw ula socday xaalada dadka iyo deegaannada Jubbaland. Waxa uu…
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, kana tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha, ayaa ka digay xanibaada dhanka cirka ah ee ay xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku soo rogtay magaaladda Kismaayo, waxa uuna sheegay in ay ka dhalan karto dhibaato iyo dagaal qabiil. Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay go’aanka Golaha Wasiiradda ee ka dhanka ah Maamulka Jubbaland uu yahay daandaansi iyo xiisad hor leh “Waa go’aan laga xumaado oo ay ka muuqato xaalad xiisad lagu abuurayo, “ayuu Kalfadhi ku yiri Xildhibaan Jindi.…
Xildhibaan Cabdifitaax Qaasim oo ka warbixiyay doorka beesha caalamka ee diyaarinta doorashada Soomaaliya
August 29, 2019 Hassan Istiila
Guddiga diyaarinta doorashada ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan qaatay muddo labo maalmood ah la yeeshay quburo caalami ah oo ka socotay Qaramada Midoobay. Kulankan ayaa looga arinsanayey qorshayaasha shaqo ee horyaalla guddigan ee ay kamid tahay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda, iyo kaalinta ay ka qaadan karaan beesha caalamka. Quburada ka socotay Qaramada Midoobay ayaa kulanka ka sheegay in diyaar u yihiin sidii ay Soomaaliya uga caawin lahaayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah islamarkaana ay haatan kala shaqeynayaan xubnaha…
Xildhibaan Dalxa oo ka hadlay mooshin laga diyaarinayo ciidamada Kenya
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee ku howlan diyaarinta mooshin ka dhan ah ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ayaa wareysi gaar ah oo uu siiyay Kalfadhi ku sharaxay sababta keentay mooshinkan la diyaariyo. Dalxa ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay xad gudubyo iyo falal aan waaqafsaneyn xeerarka caalamiga ah ka sameeyen Soomaaliya,taasi oo keentay in iyaga oo difaacaya qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliya ay mooshin ka keenayan Ciidanka Kenya ee jooga wadanka. ‘’ Annaga waxaa naga go’an wax kasta oo lid ku ah…
Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka oo kulamo la qaatay dhalinyada iyo bulshada rayidka
Guddoomiyaha Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ee Golaha Shacabka xildhibaan Cabdullahi Abuukar Xaaji (Eng.Carab), ayaa shalay guddoomiyay kulan u dhaxeeyay Guddiga iyo qaar ka mid ah ururadda bulshada rayidka Soomaaliyeed. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii ay ururada bulshada rayidka ay guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga doorashooyinka Qaranka ugu soo gudbin lahaayeen aragtiyadooda ku aadan sharciga doorashooyinka Qaranka. Xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa guddiga usoo bandhigay aragtiyadooda ku aadan sharciga doorashooyinka Qaranka ee horyaalo Golaha shacabka. Dhanka kale Guddiga KMG ah ee diyaarinta sharciga…
Xildhibaan Maxamed Ganey “Ururka Al Shabab argagixisanimadiisa iyo argagixisada ay Qaramada Midoobay aqoonsan tahay labo ayey kala yihiin”
August 29, 2019 August 29, 2019 Hassan Istiila
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo taageero ka heleysa dalal badan oo Yurub iyo Maraykanka ah ayaa ka hortimid in Al-shabaab lagu daro liiska Argagixisada ee Golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana ay tilmaamtay in qaraarka tirsigiisu yahay 1267 uu yahay mid ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye oo ka soo horjeeda dhaqaalaha lagu bixiyo horumarinta, ammaanka iyo arrimaha bani’aadanimada ee Soomaaliya. Qaraarkan ayaa soo baxay 15-kii October sanadkii 1999-kii waxaana uu qeexayaa ururada argagixisada caalamka iyo sida loola macaamilayo. Xildhibaan Maxmed Xasan Idiris oo ka tirsan Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya…
Xildhibaan Farxiyo Muumin oo u dooddeysa xuquuqda haweenka ee ka qeyb galka siyaasadda Soomaaliya
August 28, 2019 August 28, 2019 Hassan Istiila
Haweenka Xildhibaanada ah ee ku jira labada aqal ee Baarlamaanka dalka ayaa dedaal xoogleh ku bixinaya sidii ay haweenku door muuqda ugu yeelan lahayeen siyaasadda Soomaaliya oo ay u arkaan in haweenku aysan kaalin muuqata ku lahayn iminka. Waxaa jira qorshe ay horumuud u tahay dowladda kaas oo ah in haweenku ay 30-boqolkiiba ku yeeshaan matalaadda siyaasadda Soomaaliya, balse u dhaqdhaqaaqayaasha haweenka ee siyaasadda ayaa muujinaya in ay muhiim tahay in haweenku ay tiro intaas ka badan ku yeeshaan mataaladda siyaasadda. Faxiyo Muumin Cali oo ah xildhibaan ka…